Ziziphi i-New vSphere 6.5 Izici: I-vCenter Server
VMware vSphere 6.5: iseva yeVCentere
I-VMware iye yavakalisa ukuguqulelwa kwangoku kwe-vSphere 6.5 kwaye iqinisekisa ukupakisha kwimimandla emitsha, eyenza ibe yinto emangalisayo kunokuba kuluhlu oludlulileyo. Ukukhutshwa kulawulwa yi-vCenter Server Appliance kwaye kukho ukuhlaziywa ngokupheleleyo kwefowuni, ngokuvakalelwa kwangoku. Ingasetyenziselwa kokubili iiLuxux kunye neMac, kunye ne-choice top, Microsoft Windows. Kukho nanjalo ububanzi bamacandelo amatsha kwi-vCenter Server Appliance efaka into efana nayo:
Ufikelelo oluphezulu lweNgingqi: I-vCenter Server Appliance ine-Availability ephakamileyo yamanani kuphela yile nguqulelo. Kukho iingcamango ezahlukeneyo kulolu lungiselelo olusebenzayo, ama-Passive kunye namaNode angamaNgqina aqhelekileyo kwaye ahlanganiswe ngokuthe ngqo kwi-vCenter Server yangoku. Isikhokelo singaba sifutshane ukuba ilahleko iphela ilahlekile kodwa amathuba ayiluncedo kulolu hlobo.
Ukufuduka: Kwakunzima ukungena kwi-vCenter Server Appliance ngaphambi nangoku ngoku ngokuveliswa kwethuluzi lokufuduka, oku kungenxa zonke ii-akhawunti ezilula kwaye zivelisa kakhulu kunokuba zikhutshwe ngokukhawulezileyo ukukhutshwa kwe-XSUM XmUMX. Ngoku isebenzisa iWindows vCenter Server 6.0 kunye ne-2 kwaye nabani na okwangoku osebenza ngokugqibela unokufumana i-vCenter Server Appliance esebenzisa le fowuni.
Yasebenza kwiCape or Restore: I-element desc down is entsha kwaye ivumela abaxhasi ukuba bahlahle yonke i-vCenter Server kunye ne-Platform yolawulo loomatshini wolawulo, ehambelana ngqo ne-VAMI okanye i-API, kunye ne-VUM kunye nayo nayiphi na i-Auto isebenze iqhutywe zixhobo. Iqulethwe ngokubanzi kwirekhodi engaphendulwa kuyo nayiphi na igajethi yamandla umxhasi umsebenzisi usebenzisa i-SCP, i-HTTP (s), okanye ii-FTP (s).
VMware Update Manager: I-vCenter Server Appliance ngoku ngokufakela ijoyine i-VUM kunye nalabo abanamandla okubamba ukuhamba ngaphandle kweefayile zeWindows kwiVUM baya kwamkela. Abantu abanjengoku ngoku bafudukela kwinkqubo yokubuyisela kwakhona i-6.0 ngoku baya kuhambisa i-VUM kunye neenkqubo zokuphucula i-6.5, phakathi kokusetyenzwa kwe-vCenter, ukugcinwa kwezinto kunye nokulumkisa ulwazi ngokufanayo.
Ulawulo loLawulo lweeNkqubo: Olu buchule lugunyazisa ngokuqhubekayo isikhokelo ekuphuhlisweni kwalo ngokungafumananga nayiphi na into eyilwayo njengezicelo zesakhelo. Ikhonkco ibonakala ngokuthe ngqo kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye ibonisa iNethwekhi kunye neNgcaciso yeData, kunye neendawo zokuhlala kunye nebala. Omnye unokukwazi ukucinga malunga ne-CPU kunye nemilinganiselo yeememori ezongeza ukwehlisa ukuxhomekeka kwintsebenziswano yomgca wenkcitho ngokubhekiselele kwimigqaliselo yokusebenza kunye noqwalaselo olunzima.
Enye into eyongezelelweyo yi-vSphere Web Client, kunye neKlayenti ye-HTML-based VSphere esebenzise ngokupheleleyo i-HTML5-Based vSphere Client, leyo leyo inika isiseko esomeleleyo esinokukwazi ukuguqula utshintsho oluphambili njengokwenziwa kweekhompyutha, ukuphuhlisa uqoqosho lwekhompyutha. I-VMware vSphere 6.5 ngokuqinisekileyo iya kuzisa umgangatho omtsha kunye nokupasa kwizinto ezenziwayo kwiintengiso ezinkulu.